Lazao ny marina e ! | NewsMada
Lazao ny marina e !
Mihazakazaka ny fanatonan-dRafahafatesana ny olona voan’ny pesta raha vao tara ny fitsaboana. Haingana ihany koa anefa ny fifindran’ilay aretina. Midika izany fa tsy tokony hihambahambana ny fandraisana andraikitra manoloana ity loza ity. Tsy tokony hisy ny andraso andraso.
Etsy ankilan’izay, tsy toy ny taloha fa haingana ny fiparitahan’ny vaovao sy ny « tsy vaovao », noho ny tambajotra sosialy « Facebook », ampiasain’ny maro, eny, hatrany ambanivohitra any. Misy ny mpanao gazety mampahafantatra ny zavatra henony tany amin’ny fanangonam-baovao nalehany. Ao koa anefa ireo maheno « honohono », izany hoe, vaovao tsy marim-pototra ka manely izany.
Vokany, mikoropaka ny rehetra. Omaly vao maraindraina, vitsy ihany ireo nilanja fanakonam-bava, teny an-dalana teny. Ora vitsivitsy taty aoriana anefa, nilaharana izany teny amin’ny toeram-pivarotam-panafody teny, izay voatery nametra ho dimy isan’olona sisa no hamidy, ho fitsinjovana ny rehetra sy hialana amin’ireo mpanararaotra, mety hanao varo-maizina.
Raha ny marina, tokony hisy ny fampitam-baovao tsy an-kiato, ataon’ny fanjakana, mikasika ity aretina pesta ity sy ny tokony hataon’ny tsirairay manoloana izany. Hetsehina amin’izany ny karazana fampahalalam-baovao rehetra : radio, fahitalavitra, « internet », sns, mba tsy hisy tsy haheno. Tsy tokony hisy ny sivana amin’ny vaovao havoaka ho fanta-bahoaka. Ny ain’ito farany mantsy no ambony fa tsy ny seza. Na izany na tsy izany, samy tompon’andraikitra ny tsirairay amin’ny fiarovana ny tenany sy ny manodidina azy.